Ndị a bụ ụgwọ edozi nke Honor 20 na 20 Pro [+ Specifications] | Gam akporosis
Flagship ekwentị Nkwanye 20 na Honor 20 Pro a ga-eme ha iwu na May 21 site na mmemme ngosi na London. A ga-ekwupụtakwa ekwentị ndị a na China na Mee 31.
Tupu nke ahụ emee, onye nyocha, amaara maka ịkọ ozi gbasara Huawei na Honor phones na-abịa, kesara asịrị ahụ Sọpụrụ 20 na Sọpụrụ 20 Pro ama ahịa, ma na-esote…
1 Sọpụrụ 20 na Sọpụrụ 20 Pro leaked ahịa
2 Leaked nkọwapụta nke Honor 20 na Honor 20 Pro
Sọpụrụ 20 na Sọpụrụ 20 Pro leaked ahịa
Leaked ahịa nke Honor 20 na 20 Pro
Dị ka onye nyocha ahụ si kwuo, Honor 20 ga-abata n'ụdị atọ: 6GB RAM + 128GB nchekwa, 8GB nke RAM + 128GB nchekwa, na 8GB RAM + 256GB nchekwa. Modelsdị ndị a na-anụ asịrị nwere Ọnụahịa dị iche nke 2,699 yuan (~ euro 349), 2,999 yuan (~ 388 euro) na 3,499 yuan (~ euro euro 453).
The Honor 20 Pro ga-abịa na 8GB Ram + 128GB nke nchekwa na 8GB nke RAM + 256GB nke nchekwa. Modelsdị ndị a nwere Ọnụahịa dị iche nke 3,699 yuan (~ 479 euro) na 4,199 yuan (~ 543 euro).
A na-atụ anya na Honor 20 Pro Moschino Edition ga-abụ onye ọrụ na China. Ọnwụ ahụ na-ekpughe na ọ ga-ejupụta na 512GB wuru n'ime nchekwa. Agbanyeghị, enweghị ozi gbasara RAM ole ọ ga-eji.
Leaked nkọwapụta nke Honor 20 na Honor 20 Pro
Sọpụrụ 20 na-aza
N'izu a, WinFuture.de akọrọ nkọwa niile nke Honor 20 smartphone tinyere ihe oyiyi ya. O kpugheere na ngwaọrụ ahụ ga-abata na 6.26-anụ ọhịa IPS LCD panel nwere oghere n'akụkụ aka ekpe ya iji debe igwefoto selfie 32 megapixel. Na Kirin 980 ọ ga - akwado ekwentị yana 6GB RAM. Ọ nwere ike ịbịa na nchekwa nke 128GB.
The smartphone ga-agụnye a 3,750 mAh batrị na ike-abịa na SuperCharge ngwa ngwa odori technology. Ngwaọrụ sistemụ arụmọrụ nke 9 2.1 nke ejiri anwansi UI 586 ga-adị tupu arụnyere na ngwaọrụ ahụ. Ikpokoro azụ nke ekwentị nwere ike ịpụta ntọala igwefoto quad na ihe mmetụta 48-megapixel Sony IMX16 isi ihe mmetụta, 8-megapixel wide-angle lens, 2-megapixel telephoto lens, na XNUMX-megapixel nnukwu lens.
Na Honor 20 nwere ike igosipụta a akara mkpisiaka ihe mmetụta wuru na ike button. Ọ nwere ike na-abịa na sapphire acha anụnụ anụnụ na etiti abalị ojii na agba iche.
N'aka nke ọzọ, Enwere ike iji ihu igwe OLED 6.5 nke anụ ọhịa mee ihe ngosi ya na ihe ngosi mkpịsị aka na-egosipụta, ihe nkpuchi 32-megapixel n'ihu, sistemụ igwefoto quad dị elu, Kirin 980 chipset, 8 GB nke RAM, nchekwa obodo nke ihe ruru 256 GB na batrị nke ihe dịka 4,000 mAh na teknụzụ na-ebu ọnụ ngwa ngwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ndị a bụ ọnụahịa edozi nke Honor 20 na 20 Pro [+ Nkọwapụta]